Oromoo ta’ee kan kana hin hubanne, ani Oromoo dha ofiin jechuunuu mamsiisaa dha – Welcome to bilisummaa
Akka yaada fi ilaalcha kiyyaatti, garaa garummaan jira jedheen amana. Warri bilisummaa ni barbaadna jennee yaadnu, akka bilisummaa barbaadnu, fe’ii ykn hawwii agarsiifna malee, isa kana argachuu dhaaf maal godhuu akka qabnu; maaltu akka nurraa eegamu, waan hubannu natti hin fakkaatu. Bilisummaan barbaadnu ykn hawwinu kun waan akkanumatti ofumaaf dhufu ykn namni biraa nuuf fidu goonee waan yaadnu natti fakkaata. Nuyi nama biraa irraa waan tokkoo hin eegnu, maaliif akkana jetta? naan jechuu dandeessu. Kanaafis deebii qaba. Yoo bilisummaa barbaadna ykn bilisummaan haa dhufu jenne, QBO kanaaf waan tokko godhuutu nurra jira; gahee keenya gumaachuutu nurraa eegama jechuu dha. Waan kana ammookaraa lamaan godhuu dandeenya.
Previous Tokkummaan Oromummaa kan bilisummaa dhaaf ijaaramu, tokkummaa sobaa ta’uu hin danda’u
Next Eenyutu eenyu eega, eenyutu eenyurraa waa eega?